Israa'el Baqattoota Afrikaa Ari'uuf Karoorsite. - NuuralHudaa
Israa’el Baqattoota Afrikaa Ari’uuf Karoorsite.
Karoorri Ministeera dhimmaa biyyaa keessaatii fi dhimma tasgabbii Isra’eel baase akka ibsutti, mootummaan Israa’el baqattoota lammiilee Afrikaa gara Ugaandaa fi Ruwaandaatti erguuf qophii xumuruu beeksise. Baqattoota kanniin keessa 27,000 lammilee Ertiraa yoo tahan 8,000 ammoo lammilee Suudaan akka ta’an gabaasni kun ni mul’isa. baqattoonni lammiilee Itoophiyaa fi kanneen biyyoota Afrikaa birootis kan keessatti argaman akka ta’es gabaafameera.
Akka Ejensiin baqattootaa (UNHCR) jedhutti , Isra’eel karoora isiitiin baqattoota gara biyya sadaffatti deebi’uuf fedhii hin qabne hidhuuf akka qophoofte ibsuun, Isra’eel baqattoota fi namoota balaaf saaxilaman balaa irraa baraaruu dirqama seera addunyaa qabdi jedhe.
May 20, 2022 sa;aa 5:27 pm Update tahe